Optimum Vinyl Flooring ခေတ်မှီ ဆန်းသစ်သော Vinyl ကြမ်းခင်းအမျိူးမျိူး
အခန်းအနေအထားနှင့် လိုက်လျောညီထွေမည့် သင့်တော်သော Material များကို ရွေးချယ်အကြံပေးခြင်း ဖြင့် အကောင်းဆုံး ဝန်ဆောင်မှုများ Customer များ စိတ်တိုင်းကျ ဖြစ်အောင် ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိသည်။ထို့အပြင် အတွေ့အကြုံ ရင့်ကျက်သော အင်ဂျင်နီယာ များ၏ အရည်အချင်းနှင့် ကျွမ်းကျင် လုပ်သားများဖြင့် အိမ်တိုင်ရာရောက် စိတ်တိုင်းကျ အကောင်းဆုံး တပ်ဆင်ပေးလျက်ရှိသည်။ဈေးနှုန်း သင့်တင့်မှု ရှိပြီး ဆန်းသစ်လှပသော ဒီဇိုင်းစုံ အရောင်အသွေး စုံစုံလင်လင်ဖြင့် စတိုင်ကျ လှပသော ကြမ်းခင်းများကို ဖြန့်ဖြန့်ရောင်းချလျက် ရှိသည်။ အရည်အသွေး ကောင်းမွန်ပြီး ကြာရှည်ခံ အသုံးပြုနိုင်သော ကြမ်းခင်းဖြစ်ကြောင်း အာမခံပါသည်။
Laminate Flooring (Standard Series)
<p>မလေးရှား၊ ထိုင်ဝမ်မှ အရည်အသွေး ကောင်မွန် မှန်ကန်သော ပစ္စည်းများကို မှာယူတင်သွင်းပြီး ဈေးကွက်အတွင်းသို့ ရောင်းချခဲ့သည်မှာ ယခုဆို (၁ဝ) စုနှစ်ကျော် ရပ်တည်နိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။</p><p><br></p><p>- ပစ္စည်းတူရင် ဈေးသပ်သာရမယ်။</p><p><br></p><p>- ဈေးတူရင် ဝန်ဆောင်မှုကောင်းရမယ်။&nbsp;</p><p><br></p><p>- ယုံကြည့်စွာနဲ့ ဝယ်ယူ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။</p><p><br></p><p>ကျွန်းပါကေးထက် အားသာချက်များ</p><p>- သစ်သားအစစ်များဖြင့် ပြုလုပ်ထားခြင်းကြောင့် 24 နာရီ ရေစိမ်ခံခြင်း။</p><p>- Floating System ကြောင့် Topping တော်ရုံညီညာရုံဖြင့် ခင်းနိုင်ခြင်း။</p><p>- ကျွန်းပါကေးကဲ့သို့ ခုံးခြင်း၊ ကျုံ့ခြင်း၊ ကြွခြင်းမရှိခြင်း၊ ရေငွေ့ဒဏ်ခံနိုင်ခြင်း။</p><p>- Polish တင်ရန်မလို၍ တော်ရုံအရောင်မမှိန်ခြင်း။</p><p>- AL203 Coating ကြောင့် တော်ရုံခြစ်မိရုံဖြင့် အစင်းရာမထင်ခြင်း။</p><p>- တော်ရုံဆေးလိပ်မီးဒဏ်ခံနိုင်ခြင်း။</p><p>- အိမ်တွင်းသုံး Chemical ဒဏ်ခံနိုင်၍ သန့်ရှင်းရ လွယ်ကူခြင်း။</p><p>- Formaldehyde ပါသင်၍ Insect များ အလွယ်တကူ မခိုအောင်းနိုင်ခြင်း။</p><p>- ကျွန်းပါကေးထက် ဈေးနှုန်းသက်သာခြင်း။</p><p>- အလွယ်တကူပြောင်းရွှေ့သယ်ယူနိုင်ခြင်း၊ (၅) ကျင်းခန့် တစ်ရက်ထည်း အပြီးခင်းနိုင်ခြင်း။</p><p>- ကြိုက်နှစ်သက်ရာ Design, Colour စိတ်ကြိုက် ရွေးချယ် ဝယ်ယူအသုံးပြုနိုင်ခြင်း။</p><p><br></p><p>Floor ၏ စစ်မှန်သော အားမခံချက်</p><p>- လူကြီးမင်းအသုံးပြုသော Grade အပေါ်မူတည်၍ Guarante Card နှင့် စနစ်တကျ အာမခံချက်ပေးခြင်း။</p><p>- Quality (စစ်မှန်သော HDF,MDF,Grade A,B,C,D,E နှင့် AC1, AC2, AC3)</p><p>- Prize (မှန်ကန်၍ ချိုသာသောဈေးနှုန်း)</p><p>- Service (သေသပ်လှပ၍ စနစ်ကျသည့်လက်ရာ)</p><p>- Speed (One Stop Service)</p><p>- Safisfaction (ပြည့်ဝသည့် စိတ်ကျေနပ်မှု ပေးစွမ်းနိုင်ခြင်း)</p>
Optimum Wallpaper အလှဆင် နံရံကပ် Wallpaper များ
အခန်းအနေအထားနှင့် လိုက်လျောညီထွေမည့် သင့်တော်သော Material များကို ရွေးချယ်အကြံပေးခြင်း ဖြင့် အကောင်းဆုံး ဝန်ဆောင်မှုများ Customer များ စိတ်တိုင်းကျ ဖြစ်အောင် ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိသည်။ထို့အပြင် အတွေ့အကြုံ ရင့်ကျက်သော အင်ဂျင်နီယာ များ၏ အရည်အချင်းနှင့် ကျွမ်းကျင် လုပ်သားများဖြင့် အိမ်တိုင်ရာရောက် စိတ်တိုင်းကျ အကောင်းဆုံး တပ်ဆင်ပေးလျက်ရှိသည်။ဈေးနှုန်း သင့်တင့်မှု ရှိပြီး ဆန်းသစ်လှပသော ဒီဇိုင်းစုံ အရောင်အသွေး စုံစုံလင်လင်ဖြင့် စတိုင်ကျ လှပသော Wallpaperများကို ဖြန့်ဖြန့်ရောင်းချလျက် ရှိသည်။ အရည်အသွေး ကောင်းမွန်ပြီး ကြာရှည်ခံ အသုံးပြုနိုင်သောနံရံကပ် Wallpaper ဖြစ်ကြောင်း အာမခံပါသည်။
ကောင်းမွန်သော အရည်အသွေးနှင့် Anchor Portland Cement
အထွေထွေဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတိုင်း အတွက်အသုံးပြုနိုင်ပြီး Compressive Strength ကိုပေးစွမ်းနိုင်သော ဘိလပ်မြေတစ်မျိူးဖြစ်သည်။လူနေအိမ် အဆောက်အအုံများ၊ရှော့ပင်းစင်တာများ နှင့် အထွေထွေဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများအတွက် တာရှည်ခိုင်ခံမှုနှင့် အသုံးပြုရလွယ်ကူအောင် အလေးပေးထုတ်လုပ်ထားသည်။အတွေ့အကြုံရင့်ကျက်သော အင်ဂျင်နီယာ၏အကြံပေးချက်အတိုင်း အချိူးအစားမှန်ကန်စွာ ချိန်ဆရောစပ်ပြီးအသုံးပြုနိုင်သည်။အဆိုပါ ဘိလပ်မြေကို အသုံးပြုပြီးနောက် compressive strength ကို လျော့ချပေးနိုင်သည်။ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းတိုင်းမရှိမဖြစ် အသုံးပြုပြီး စိတ်ကူးထဲမှ အိမ်မက်တွေကို Portland ဘိလပ်မြေဖြင့် လက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ပါပြီ။စိတ်ဝင်စားသော customer များအနေဖြင့် email သို့မဟုတ် ဖုန်းဖြင့် ဆက်သွယ်မှာယူနိုင်ပါပြီ။ လူကိုယ်တိုင်လာရောက် ကြည့်ရှုဝယ်ယူ အားပေးနိုင်ပြီ ဖြစ်ကြောင့် အသိပေးကြေငြာအပ်ပါသည်။
မင်္ဂလာပါခဗျာ ကျွန်တော်တို့Mr.Screem မှလူကြီးမင်းတို့ မိသားစု အိမ်ဂေဟာအတွင်း ခြင်အန္တရယ်မှ ကင်းဝေးစေရန်အတွက် BFF System ဘာဂျာ ခြင်လုံဇကာကို မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါသည်။ အားသာချက်များ 1. ခြင်အန္တရယ်ကို100%ကာကွယ်နိုင်ခြင်း 2. ခြင်လုံဇကာတံခါး တပ်ဆင်နိုင်သလို နေကာတံခါးလဲ တပ်ဆင်နိုင်ခြင်း အကယ်၍ တံခါပေါက်နှစ်မျိုးလုံးကိုလဲ ဘယ်ညာတပ်ဆင်မည်ဆိုပါက အဆင်ပြေနိုင်ပါသည်။ 3. Barrier Free System ဘာဂျာတံခါ၏ လျှောက်လမ်းမှာ အလွန်ပါးလွှာသဖြင့် ကြမ်းခင်းပေါ် တွင် ခလုပ်တိုက်ခြင်း ချော်လဲခြင်းများ မဖြစ်ပေါ်စေပါ။ 4.Barrier Free System ခြင်လုံဇကာတံခါး ကိုမိမိလိုအပ်သော နေရာတွင် ရပ်တန် ထားနိုင်သောကြောင့် အ၀င်အထွက် ပြုလုပ်ရန်အတွက် အဆင်ပြေစေပါသည်။ 5. ရရှိနိုင်သောဖရိန် Color များမှာWhite,Dark Grey,Yellow Wooden Color များကို ရွေးချယ် နိုင်ပါသည်။
Laminate Flooring (V- Groove Series)
<p>မလေးရှား၊ ထိုင်ဝမ်မှ အရည်အသွေး ကောင်မွန် မှန်ကန်သော ပစ္စည်းများကို မှာယူတင်သွင်းပြီး ဈေးကွက်အတွင်းသို့ ရောင်းချခဲ့သည်မှာ ယခုဆို (၁ဝ) စုနှစ်ကျော် ရပ်တည်နိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။</p><p>- ပစ္စည်းတူရင် ဈေးသပ်သာရမယ်။</p><p>- ဈေးတူရင် ဝန်ဆောင်မှုကောင်းရမယ်။&nbsp;</p><p>- ယုံကြည့်စွာနဲ့ ဝယ်ယူ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။</p><p><br></p><p>ကျွန်းပါကေးထက် အားသာချက်များ</p><p>- သစ်သားအစစ်များဖြင့် ပြုလုပ်ထားခြင်းကြောင့် 24 နာရီ ရေစိမ်ခံခြင်း။</p><p>- Floating System ကြောင့် Topping တော်ရုံညီညာရုံဖြင့် ခင်းနိုင်ခြင်း။</p><p>- ကျွန်းပါကေးကဲ့သို့ ခုံးခြင်း၊ ကျုံ့ခြင်း၊ ကြွခြင်းမရှိခြင်း၊ ရေငွေ့ဒဏ်ခံနိုင်ခြင်း။</p><p>- Polish တင်ရန်မလို၍ တော်ရုံအရောင်မမှိန်ခြင်း။</p><p>- AL203 Coating ကြောင့် တော်ရုံခြစ်မိရုံဖြင့် အစင်းရာမထင်ခြင်း။</p><p>- တော်ရုံဆေးလိပ်မီးဒဏ်ခံနိုင်ခြင်း။</p><p>- အိမ်တွင်းသုံး Chemical ဒဏ်ခံနိုင်၍ သန့်ရှင်းရ လွယ်ကူခြင်း။</p><p>- Formaldehyde ပါသင်၍ Insect များ အလွယ်တကူ မခိုအောင်းနိုင်ခြင်း။</p><p>- ကျွန်းပါကေးထက် ဈေးနှုန်းသက်သာခြင်း။</p><p>- အလွယ်တကူပြောင်းရွှေ့သယ်ယူနိုင်ခြင်း၊ (၅) ကျင်းခန့် တစ်ရက်ထည်း အပြီးခင်းနိုင်ခြင်း။</p><p>- ကြိုက်နှစ်သက်ရာ Design, Colour စိတ်ကြိုက် ရွေးချယ် ဝယ်ယူအသုံးပြုနိုင်ခြင်း။</p><p><br></p><p>Floor ၏ စစ်မှန်သော အားမခံချက်</p><p>- လူကြီးမင်းအသုံးပြုသော Grade အပေါ်မူတည်၍ Guarante Card နှင့် စနစ်တကျ အာမခံချက်ပေးခြင်း။</p><p>- Quality (စစ်မှန်သော HDF,MDF,Grade A,B,C,D,E နှင့် AC1, AC2, AC3)</p><p>- Prize (မှန်ကန်၍ ချိုသာသောဈေးနှုန်း)</p><p>- Service (သေသပ်လှပ၍ စနစ်ကျသည့်လက်ရာ)</p><p>- Speed (One Stop Service)</p><p>- Safisfaction (ပြည့်ဝသည့် စိတ်ကျေနပ်မှု ပေးစွမ်းနိုင်ခြင်း)</p>
လှပ သေသပ် ပီး ကြာရှည် စွာ အသုံးပြု နိုင်သည့် အုတ်ကြွပ် မိုး ( Roofing Sheet5angle )
Chan Yin Industries ကုမ္ပဏီမှ တင်သွင်းသောအရည်သွေးကောင်းမွန်သည့် လှပပီးဒီဇိုင်းဆန်သည့်အဆောက်အအုံသုံးနှင့်စက်ရုံသုံးပစ္စည်းဖြစ်သည့် အုတ်ကြွပ်အမိုး (5Angle roofing sheet )ကို လူကြီးမင်းတို့အတွက်တင်သွင်းဖြန့် ဖြူးရောင်းချလျက်ရှိ ပါသည်။ လူကြီးမင်း တို့ ၏ အိမ်၊ဟိုတည်၊စက်ရုံအလုပ်ရုံများတွင်သာမက အခြားဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများတွ င်ပါအသုံးပြုပါက ကြာရှည်စွာ အသုံးပြုနိုင်သော အရည်သွေးကောင်းမွန်သည့် အုတ်ကြွပ်မိုး (5Angle roofing sheet )ကိုရွေးချယ် အသုံးပြုသင့်ပါသည်။၄င်းအုတ်ကြွပ်အမိုး(5Angle roofing sheet ) ၏ကာလာအရောင်များကိုလည်း လူကြီးမင်းတို့ စိတ်ကြို က်ရွေးချယ်ဝယ်ယူ နိုင်ပါသည်။ဒါ့ ကြောင့်လူကြီးမင်းတို့ အနေဖြင့် အရည်သွေးကောင်းမွန်ပြီး ကြာရှည်ခံသည့် ဒီဇိုင်းဆန်းသော အုတ်ကြွပ်မိုးများကို ဝယ်ယူအ သုံးပြုလိုပါက Chan Yin Industries ကုမ္ပဏီကို တိုက်ရိုက်ဆက် သွယ်မှာယူနိုင်ပါသည်။
Chan Yin Industries ကုမ္ပဏီမှ လူကြီးမင်းတို့ အတွက် အရည်သွေးကောင်းမွန်သော အုတ်ကြွပ် များဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည့် အိမ်အမိုး များကို လူကြီးမင်းတို့ အတွက်ဖြန့် ဖြူးရောင်း ချ လျက်ရှိပါသည်။ ဒါ့ပြင် ၄င်း လှိုင်းခုံး ပုံသဏ္ဍန် ( Wavetile roofing sheet )ကို လူကြီး မင်းတို့ ၏ အိမ် အဆောက်အဦးများတွင် အလှဆင် တပ်ဆင်ပေးလျက်ရှိပါသည်။ ဒါ့ကြောင့် လူကြီးမင်းတို့ အနေဖြင့် လှပသေသပ်သည့် အပြင် ဒီဇိုင်းဆန်းပီး ကြာရှည် အသုံးခံသော လှိုင်းခုံး ပုံသဏ္ဍန် ( Wavetile roofing sheet ) ကိုဝယ်ယူ အသုံးပြုလိုပါက Chan Yin Industries ကုမ္ပဏီကို တိုက်ရိုက် ဆက်သွယ် မှာယူနိုင်ပါသည်
လှပပီးဒီဇိုင်းဆန်သောအလှဆင်ကြွေပြား (vinyl flooring)
a 12 Myanmar ကုမ္ပဏီမှ အိမ်အလှဆင်သုံးပစ္စည်းများဖြစ်သည့် ကြွေပြား(vinyl flooring) များကို လူကြီးမင်းတို့ ၏အိမ်အဆောက်အဦး လုပ်ငန်းများတွင်အလှဆင်နိုင်ရန်အတွက် တင်သွင်းဖြန့် ဖြူးရောင်းချပေးလျက်ရှိသည်။အရည်သွေးကောင်းမွန်ပီးဒီဇိုင်းစုံလင်လှသောေ ကြွပြားများကို လူကြီးမင်းတို့ ၏ဘေစင်၊မီးဖိုချောင်များ၊စားပွဲများတွင် အလှဆင်တပ်ဆင်နိုင် ပါသည်။ဒါ့ကြောင့်လူကြီးမင်းတို့ ၏ နေအိမ် မီးဖိုချောင်များ ကုမ္ပဏီ reception counter များတွင်လူကြီးမင်းတို့ စိတ်ကြိုက် ကြွေပြားဒီဇိုင်းများကိုအလှဆင်တပ်ဆင်နိုင်ပါသည်။ လူကြီးမင်းတို့ ၏ အိမ်တွင်ရှိ ဘေစင် မီးဖိုချောင် စားပွဲများကို လှပသေသပ်သော ကြွေပြား များ (vinyl flooring)များဖြင့် အလှဆင်လိုပါက a12 Myanmar ကုမ္ပဏီကိုတိုက်ရိုက်ဆက် သွယ်မှာယူနိုင်ပါသည်။
အထွေထွေဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းအတွက် TPI Portland Cement Type 1 (Red)
ယခုမိတ်ဆက်ပေးမယ့် ဘိလပ်မြေကတော့ Porland အမျိူးအစားဖြစ်ပြီး နိုင်ငံတကာအဆင့်မှီ အရည်အသွေးနှင့် ခေတ်မှီသောနည်းပညာများဖြင့် ပေါင်းစပ်ထုတ်လုပ်ထားသော ထိုင်းနိုင်ငံမှ အရည်အသွေးမြင့် ဘိလပ်မြေအမျိူးအစားတစ်ခုဖြစ်သည်။ TPI Portland ဘိလပ်မြေ (အနီရောင်) ကို အထွေထွေဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းများ၊ High Compressive Strength အတွက် လိုအပ်သော သိပ်သည်းဆများအတွက် လည်းကောင်း၊ ယေဘုယျ ကွန်ကရစ်လုပ်ငန်းအတွက် လည်းကောင်း၊ တံတားများ၊ အဝေးပြေးလမ်းများ၊ လေဆိပ်နှင့် Pretressed ကွန်ကရစ်အတွက် အစရှိသော ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများအတွက် လိုသလို အလွယ်တကူ အသုံးပြုနိုင်သည်။။ရေရောစပ်မှု အချိူးအစား မှန်ကန်စွာ ရောစပ်ခြင်းဖြင့် အလွယ်တကူအသုံးပြုနိုင်သည်။မတူညီသော သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအခြေအနေပေါ် မူတည်ပြီး အဆောက်အအုံးများကြာရှည်တည်တံခိုင်မြဲရန်အတွက် ကွန်ကရစ်အဖြစ်အသုံးပြုနိုင်သည်။ထိုဘိလပ်မြေကို အသုံးပြုပြီးနောက် Compressive Strength ကို လျော့ချပေးနိုင်သည်။
လှပသေသပ်ပီး ဒီဇိုင်းဆန်းသည့် လှိုင်းခွက် ပုံသဏ္ဍန်ရှိသည့် အုတ်ကြွပ်မိုး ( Wave title concave )
Chan Yin Industries ကုမ္ပဏီမှ လူကြီးမင်းတို့ အတွက် အရည်သွေးကောင်းမွန်သော လှိုင်း ခွက် အတွန့် ပုံသဏ္ဍန်ရှိသည့် အုတ်ကြွပ်မိုး များကို လူကြီးမင်းတို့ အတွက် ဖြန့် ဖြူး ရောင်းချလျက်ရှိပါသည်။ ၄င်းအုတ်ကြွပ် မိုးများသည် လူကြီးမင်းတို့ ၏ အိမ်ခေါင်းမိုး များကို လှပသေသပ်သော အိမ်အမိုးများ အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲ အသုံးပြုနိုင်ရန် အတွက် ရောင်းချ ပေးလျက်ရှိပါသည်။ ၄င်း လှိုင်းခွက် အတွန့် ပုံသဏ္ဍန် အုတ်ကြွတ်မိုးသည် ဒီဇိုင်းဆန်းပီး လှပသေသပ်ရုံသာ မက ကြာရှည် လည်း အသုံးပြုနိုင်သောကြောင့် လူကြီးမင်းတို့ အနေဖြင့် ဝယ်ယူအသုံးပြုသင့်ပါသည်။ဒါ့ကြောင့်လူကြီးမင်းတို့ အနေဖြင့် ၄င်း လှိုင်းခွက် အတွန့် ပုံသဏ္ဍန် ရှိသည့် အုတ်ကြွတ်မိုး ( Roofting Sheet concave ) ကို ဝယ်ယူ အသုံးပြုလိုပါက Chan Yin Industries ကုမ္ပဏီကို တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ် မှာယူနိုင်ပါသည်။
Projects Decoration Services (Laminate Flooring)
လှပပြီး အသုံးခံသော Laminate Flooring
အောင်မေတ္တာလမ်း၊ ကျိူက်က္ကဆံရှိ အိမ်ကို Ls-7510 ဖြင့် ခင်းထားသည့် ပုံများဖြစ်ပါသည်။ကျွန်တော်တို့ FloorKing Showroom များသို့ ကြမ်းခင်းပြားဒီဇိုင်းများကို လူကိုယ်တိုင်လာရောက်လေ့လာပြီး Floorking စားပွဲတင်ပြက္ခဒိန်များကို နှစ်ဦးလက်ဆောင်အဖြစ် ရယူနိုင်ပါသည်။Floorking ဝန်ဆောင်မှုပေးရာမှာ စကာတင် ဘိတင်တွေက PVC လို့ခေါ်တဲ့ ကော်ပြားကို အသုံးမပြုပဲ သစ်သားကို အခြေခံပြီး ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ အရည်အသွေးမြင့် လှပသော ကြိတ်သားစကာတင် ဘိတင်တွေက ပစ္စည်းကိုသာ အသုံးပြုပါတယ်။သင့်အိမ်မက်များ လှပစေဖို့ Floorking ကြမ်းခင်းပြားဖြင့် အလှဆင်နိုင်ပါပြီ။&quot;ယုံကြည်စိတ်ချ လှပခင်းကျင်း FloorKing&quot;။FloorKing Laminate ကြမ်းခင်းပြား အရောင်းဆိုင်များကိုပါ တစ်ခါတည်း မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ် ခင်ဗျာ။အမှတ်(၅၈)၊၅လမ်း၊မြေညီထပ်၊ လမ်းမတော်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ဖြစ်ပါတယ်။
From the beginning that TPI Polene Public Company decided to produce sufciency volume of cement to supply the needs of domestic market and in March , 1991 establisher on afliate company . TPI Concrete Co.,Ltd witharegistered capital of 40 millions boht to playamajor role in supplying ready - mixed concrete to meet the needs of the construction industry in relation to property development and industrial factory expansion.